Abhidhamma teaching mp3 audio by Dr. Mehm TIn Mon <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
The following lists are the high quality audio file in MP3 format.
Please be note that the average file size for MP3 is about 70MBytes
and it may take time to download.
If you are listening the audio on-line, it is recommended to listen
the low bandwidth window media audio format. Please click here.
International Pa-Auk Forest Meditation Centre
Branch of Pa-Auk Forest Meditation Centre, Thanlyin Township
Tel: (95) 56 - 21927, (95) 56 - 21830 Address in Yangon: U Nyunt Tin, Tel: (95) 1- 577808
တွင် ဟောကြာတော်မူသော တရားတော်များ
April 2003 သြင်္ကန်အတွင်း ဟောကြားသော အလယ်လမ်းစဉ်တရားတော်
April 2004 သြင်္ကန်အတွင်း ဟောကြားသော သံသရာဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေးတရားတော်
၁။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၂။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၃။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၄။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၅။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၆။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၇။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၈။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၉။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၁၀။ April 2004 သံသရာ ဝတ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်ရေး တရားတော်
၁။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၁)
၂။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၂)
၃။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၃)
၄။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၄)
၅။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၅)
၆။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၆)
၇။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၇)
၈။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၈)
၉။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်းတရား (၉)
သံလျှင် ဖားအောက်တောရ ၁၀ ရက်တရားစခန်းတွင်
(၁၁-၄-၂၀၀၈ မှ ၁၇-၄-၂၀၀၈)
၁။ ၁၁-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၂။ ၁၂-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၄။ ၁၄-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၅။ ၁၅-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၆။ ၁၆-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
၇။ ၁၇-၄-၂၀၀၈ အကောင်းဆုံးဘဝရဘို့ အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်
(၁၁-၄-၂၀၀၈ မှ ၁၈-၄-၂၀၀၈)
၁။ ၁၁-၄-၂၀၀၈ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ
၂။ ၁၂-၄-၂၀၀၈ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၈ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ
၄။ ၁၄-၄-၂၀၀၈ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ
၁၉-၇-၂၀၀၇ မှ ၂-၈-၂၀၀၇ထိ
ရွှေတိဂုံစေတီတော် စည်ပင်ဓမ္မာရုံ တွင်ဟောကြားသော တရားတော်များ
၁။ ၁၉-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (စိတ်ပိုင်း)
၂။ ၂၀-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (စိတ်ပိုင်း)
၃။ ၂၁-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (စေတသိက်ပိုင်း)
၄။ ၂၂-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (စေတသိက်ပိုင်း)
၅။ ၂၃-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ပကိဏ်းပိုင်း)
၆။ ၂၄-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ဝီထိပိုင်း)
၇။ ၂၅-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ဝီထိပိုင်း၊ ဘုံပိုင်း)
၈။ ၂၆-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ဘုံပိုင်း)
၉။ ၂၇-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ပစ္စည်းပိုင်း)
၁၀။ ၂၈-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (သမုစ္စည်းပိုင်း)
၁၁။ ၂၉-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ပစ္စည်းပိုင်း)
၁၂။ ၃၀-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ပစ္စည်းပိုင်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း)
၁၃။ ၃၁-၇-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း)
၁၄။ ၁-၈-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (တရားရှုမှတ်နည်း)
၁၅။ ၁-၈-၂၀၀၇ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း (တရားရှုမှတ်နည်း)
အထက်ပါ တရားများကို (ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ်) စာအုပ်နှင့် ယှဉ်တွဲလေ့လာပါရန်
၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁)
၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၂)
၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၃)
၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၄)
၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၅)
၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၆)
၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၇)
၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၈)
၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၉)
၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁၀)
၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁၁)
၂၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁၂)
၂၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁၃)
၂၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သင်တန်း (၁၄)
အထက်ပါ တရားများကို (ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂအလင်းးပြ နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီး) စာအုပ်နှင့် ယှဉ်တွဲလေ့လာပါရန်
ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂအလင်းးပြ နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီး (ပထမတွဲ)
၃၀။ ဘဝအနှစ်သာရ၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင်ဟောကြားသည်
၃၁။ ဘဝဖန်ဆင်းရှင် ကံတရား၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင်ဟောကြားသည်
၃၂။ မြတ်ဘာဝနာ၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင်ဟောကြားသည်
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အထူး စီစဉ်၍
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီး
လှည့်လည် ဟောကြားပို့ချခဲ့ သော
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ တရားများ
၃၃။ ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ကံတရား (၁)
၃၄။ ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ကံတရား (၂)
၃၅။ ဘဝဖန်ဆင်းရှင်ကံတရား (၃)
၃၆။ မြတ်ဘာဝနာ (၁) ၊ ဇေယျဝတီ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်
၃၇။ မြတ်ဘာဝနာ (၂) ၊ ဇေယျဝတီ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်
၃၈။ မြတ်ဘာဝနာ (၃) ၊ ဇေယျဝတီ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်
၃၉။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ (၁) ၊ အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်
၄၀။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ (၂)၊ အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်
၄၁။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ (၃)၊ အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်
၄၂။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ (၄)၊ အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်
၄၃။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာရိတ္တပညာ (၅)၊ အထက(၂)ကြည့်မြင်တိုင်